Heshiis lagu soo afjaray cunta ka soomidda maxaabiista reer Falastiin oo lagu gadhay Qaahira. – Radio Daljir
Heshiis lagu soo afjaray cunta ka soomidda maxaabiista reer Falastiin oo lagu gadhay Qaahira.
Qahira, May 14 – Heshiis lagu soo afjarayo cunto ka soomidda ilaa laba kun oo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku jira jeelasha dalka Israel ayaa lagu gaadhay magaalada Qaahira ee xarunta dalkaasi Masarsida sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Falastiiniyiinta .
? heshiishka waxaa lagu gaadhay magaalada Qaahira si loo dhameeyo cunto ka soomid ay waddeen illaa laba kun oo maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku jira jeelasha Israel ,laakiin arrinkan waxaa ay tahay in ay ogolaadaana gudiga cunto ka soomayaasha? sidaasi waxaa Television-ka Aljazeera u sheegay Ciisa Karaaka oo ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Falastiiniyiinta.
Mr Karaaka ayaa intaasi ku daray in qodobada heshiishka ay ka mid yihiin in maxaabiista reer Qasa ay soo booqankaraan qoysaskoodu iyo welib in la joojiyo maxaabiista keli ahaanshaha loo xidho.
Afhayeen u hadlay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee Xamaas oo lagu magcaabo Taher al-Nono ayaa isaguna sheegay in dadaal xoogan oo ay sameeyeen dhexdhexaadiyayaasha Masaaridu lagu xaqiijiyey in la meelmariyo dalabaadka maxaabiista.
Waaxada maxaabiista ee Israel ayaa sheegaysa in ilaa 1,550 maxbuus oo reer Falastiin ah ay diidanyihiin cuntada ,laakiin u dhaqdhaqaaqayaasha falastiiniyiinta ayaa sheegaay in tirada maxaabiista cuntada ka soomay ay gaadhayaan ilaa 2,500 .
Maxaabiista Falastiiniyiinta ayaa bilaabay ololaha ay cuntada kaga soomayaan 17kii bishii hore ee April, waxana ay ka cabanayeen nolosha jeelasha oo aad u liidata , iyagoo sidoo kale diidan siyaasadda dhinaca xabsiyada ee Israel.